Marc Ravalomanana “Leo kolikoly sy fitiavan-tena ny vahoaka”
Ady amin’ny gaboraraka Tena mafy ny miandry izay ho ben’ny tanànan’Iarivo
Ny 24 septambra ho avy izao no ho fantatra ny lisitr’ireo kandida nahafeno fepetra hiatrika ny fifidianana ben’ny tanàna amin’ny 27 novambra.
Kandidà IRD Hialokalofan`ny mpamadika palitao
Amin`ny 24 septambra izao no hivoaka ny tatitra ofisialy havoakan` ny CENI momba ireo kandidà hirotsaka hofidiana ben`ny tanàna ary
Maitre Olala « Famitahana vahoaka foana ve no iainana eto ? »
Mahagaga, hoy ny mpahay lalàna, Willy Razafinjatovo na Maitre Olala, fa efa tamin’ny 9 jolay no tafapetraka tao amin’ny biraon’ny fitsarana
Mpanolotsain`ny tanàna Manana andraikitra goavana
Ny lalàmpanorenana ao amin`ny and. faha 150-151 dia mamaritra ny andraikitry ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Mizara roa ny ao amin`ny tanàna.
Madagasikara Tsy hita taratra ny fampiharana ny demokrasia
Krizy politika fahadimy no andalovan`i Madagasikara taorian`ny famerenana ny fahaleovantenany. Ireo krizy nifanesy, nanomboka ny taona 1972 hatramin`ny aprily 2018,
Fifidianana Tsy mora ny maka ny fon’Antananarivo
Ny fanamarihana azo aroso raha ny vokatra teto Antananarivo rehefa fifidianana no raisina dia tsy midika ho fandresena avy hatrany ny famoriana vahoaka.
Fifidianana ho avy “Hamaritra ny politika eto Madagasikara”
Ity fifidianana ho avy ity no hamaritra indray ny politika eto Madagasikara, hoy ny kandida ho mpanolontsain’ny tanàna eto Antananarivo, Nantenaina Rakotonirina, raha nanontaniana mikasika ny fahitany izany fifidianana izany.
Vitsy ny olona no tonga nifidy ary maro no azo hanazavana izany, toy ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny rafitra mpikarakara fifidianana noho ny zava-nitranga tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika farany teo, ny laza ratsin’ny Antenimieram-pirenena noho ny nataon’ireo solombavambahoaka teo aloha izay nanjakan’ny kolikoly, hoy i Marc Ravalomanana.
Nambarany fa tsy resy akory ny TIM fa nandresy saingy betsaka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny hala-bato misy. Tsy atao mahakivy fa tsy maintsy hatrehina, tsy maintsy mijoro hatrany isika manohitra ny tsy mety ary mampahafantatra ny vahoaka izany, hoy izy. Leo fitiavan-tena, fitiavan-tseza sy ny kolikoly ny Malagasy. Tsy manaja ny asany araka ny lalàna misy ireo manana andraikitra amin’ireny andrim-panjakana ireny. Misy ireo mpitondra na ny olona sasany mihevitra fa tokony hofoanana ny andrim-panjakana sasany toy ny antenimierandoholona na ny Antenimieram-pirenena fa mandany vola. Ny marina dia tsy mahalala ny asany ireo olom-boafidy sasany ka manjaka ny kolikoly ary ao ireo tia tena ka tsy mijery ny tombontsoam-bahoaka. Ireo no manimba ny andrim-panjakana ka tokony ho izy ireo no beazina fa tsy ny andrim-panjakana no foanana. Ireo “institutions” ireo no maha firenena Repoblikanina ny firenena sy fototra hiorenan’ny demokrasia ka tokony harovana. Raha misy tsy mety ataon’ny filoha, ohatra, dia anjaran’ireo andrim-panjakana hafa toy ny mpanao lalàna (antenimiera roa tonta) sy ny HCC no miteny azy sy mampihatra ny lalàna misy fa tsy ny “Présidence” akory no foanana. Fehiny, ny TIM.K25 dia miezaka hatrany mampiofana ireo olom-boafidiny ary manabe ny vahoaka ary hijoro hiaro hatrany ireo andrim-panjakana misy eto Madagasikara, hoy i Marc Ravalomanana.
Marigny sy Toky R